भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: December 2007
धुन्चे पुग्ने अघि पहिरो जाने चर्चित ठाउ ठाडेबाट केहि समय अघि लिएको यो लाङ्टाङ्को तस्बिर हेर्दै गर्दा नया पत्रिकाको पौष ३ गतेको अँकमा प्रकाशित इको-टुरिज्मको यो लेख सान्दर्भिक लागेर त्यसको केहि अँस
संरक्षण विभागले 'इको-टुरिज्म' विकासका लागि संरक्षण कार्यक्रमलाई बढाउन सक्छ । पर्ूवाधारजन्य कार्यालयले सडक, विद्युत्, टेलिफोन, सवारी साधनको सुविधा प्रदान गर्न सक्छ । योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट पर्यटनको विकास आवश्यकता निर्धारण गर्न सक्छ । टुर अपरेटरले सम्बन्धित स्थलको सम्पूण जानकारी राखी सो क्षेत्रको सम्भावना, आवश्यकता र समस्या निर्धारण गर्न सक्छ । लगानीकताले होटल, लजलगायतका सुविधा प्रदान गर्न सक्छ । गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित स्थलको स्थानीय विकासमा पर्यटनको भूमिकालाई समुदायमा लैजान सक्छ र दातृ संस्थाले समुदायको आयआर्जनको स्रोत बढाउन आवश्यक उद्यमशीलता विकासका लागि उपयुक्त विकास रणनीति, योजना, प्रशिक्षण, बजारीकरण, पर््रवर्द्धनजस्ता कार्यमा सहयोग पुर्‍याउ“छ । यी विभिन्न सरोकारवाला संस्था जसको सहकार्य वा सहभागिता 'इको-टुरिज्म' विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपण हुन्छ । हिमाल, पहाड र तर्राईको भूगोलले सि“गारिएको नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको धनी मुलुक हो । जुन सम्पदामा रहेको आकर्षाकै कारण नेपाल 'इको-टुरिज्म' गतिविधिका लागि महत्त्वपूण गन्तव्यस्थल हुन पुगेको छ । नेपालको पर्यटन विकासको सुरुवातलाई हेदा प्राकृतिक सम्पदाको आकर्षाबाट नै भएको छ । नेपालको यही अद्वितीय प्राकृतिक सुन्दरता, शृखंलाबद्घ श्वेत पर्वतीय हिमशिला, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक सामञ्जस्य, बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक सामाजिक संरचना र जीवनशैलीलगायतका स्रोतले गर्दा 'इको-टुरिज्म' विकासको अविच्छिन्न स्रोत हो । संरक्षण र पर्यटन विकासका दुइ मूल उद्देश्य लिएर नेपालमा स्थापित भएका १६ संरक्षित स्थल मूलतः 'इको-टुरिज्म' विकासका मूल्य, मान्यता, र ध्येयबाट निर्देशित छन् । तापनि, विद्यमान संभावनालाई संस्थागत गर्न आवश्यक 'इको-टुरिज्म' सम्बन्धी ऐन तथा नीति निर्माण नगरिनुले नेपालको पर्यटन विकास पर्ूण्ातः परम्पराबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 3:11 AM2comments:
गत भदौको पहिलो हप्ता लिएको गोसाईकुण्डको तस्बिर हेर्दा लाग्छ , यसले आकाश छुन खोज्दैछ । चार हजार मीटर माथि रहेको यस कुण्डमा झण्डै २५ हजार आन्तरिक पर्यटक ( तिर्थयात्री) भदौमा आएको बताइएको छ ।
के छैन त यसमा आकाशको तस्बिर!
Posted by Reality Bites, Nepal at 12:13 AM3comments:
केहि समय अघि लाङ्टाङ् हिमाल, रसुवा घुमेर फर्केका पर्यटकलाई त्रिसुलीमा देख्दा उनिहरु एक-आपसमा कुरा गर्दै थिए । मेरो आखा भने उनीहरुले रिजर्व गरेको बसमा लेखेको अक्षर "पर्यटक मात्र" मा पर्यो । यसरी नै आगामी सिजनमा पनि आफ्ना अरु साथीहरुलाई लाङ्टाङ्मा ल्याउन यि बिदेशीले गर्ने सानो प्रचारले देशलाई कति फाइदा पुग्ने थियो ! अनि सन् २००९ लाई नेपाल भ्रमण बर्ष मनाउने योजना साच्चै आबश्यक छ पनि ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 7:03 PM 1 comment:
नेपालको स्याफ्रुबाट न्युयोर्कको स्वतन्त्रताको टावर बिचको तुलना गर्नु गारो कुरो हो । तर एकजना साथीले आफु न्युयोर्क जादा खिचेको यो तस्बिर च्याटमा ट्रान्सफर हुदा मलाई सानोमा स्कुलको किताबमा यही स्यामस्वेत तस्बिर पढेको याद आयो ।तर अहिले समय बदलिसक्यो- साथीहरु त्यो स्वतन्त्रताको प्रतिक तस्बिर भएको देशमा गएर पढिरहेका छन् ।
थाहा छैन , उनीहरुले लिएको बाटोले देशलाई पक्कै पनि कति फाइदा गर्ला? कमसेकम अन्तराष्ट्रिय डिग्री गरेर नेपाल फर्केपछि यतै त्यसलाई उपयोग गर्न पाए कति सुन्दर हुने थियो नि !
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:14 PM3comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 8:41 PM 1 comment:
Posted by Reality Bites, Nepal at 3:55 AM3comments: